I-Line Pump Pipe
"I-ejenti ekhonjiwe yokuqinisa ubuso" yezinto zokwakha ezishisayo
Ikhonkrithi yokuqinisa indawo ekhonjiwe iwuhlobo oluthile lwento yokuncibilika kwamanzi oketshezi olunamanzi Inokubukeka okungenambala futhi okusobala. Kunezinto ezimbili zezinto zokwakha kanye nezinto ezinento eyodwa emakethe. Umphumela wokuqiniswa kwezinto ezimbili zezinto ezingcono ungcono kakhulu ....
"Ukhonkolo ohlanganisiwe osindayo" wezinto zokwakha ezintsha
I-lightweight aggregate concrete (i-LGC), enye yezinto zokwakha ezintsha, ikhonkrithi engasindi eyenziwe nge-lightweight aggregate enobuningi obuningi obungadluli ku-1900kg / m3, obaziwa nangokuthi ukhonkolo ongenalutho opholile. Ukhonkolo ohlangene ongasindi unezici I-lightweight agg ...
Kuvulwa isithangami sengqungquthela yezobuchwepheshe bokuvikela ukhonkolo 818
Ku-2018, ukukhiqizwa kukakhonkolo kukazwelonke kufinyelele kuma-cubic metres ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2.35, kwathi ngonyaka wezi-2019, kwafinyelela kuma-cubic metres ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2,4, ngokukhuphuka konyaka okucishe kube ngu-3.46%. Ukusetshenziswa kukakhonkolo eChina kukleliswe emhlabeni iminyaka engaphezu kwengu-30. Ngo-2019, ingqikithi ephezulu yaseChina ...